Yeka Ukuthetha Umamele | Martech Zone
Imidiya yokuncokola yile zentlalo. Sonke sivile ukuba amaxesha asisigidi. Isizathu sokuba sonke sive oku amaxesha asisigidi kukuba kuphela komgaqo omnye ongaguquguqukiyo onokuthi ungqinwe ngemithombo yeendaba zentlalo nangubani na.
Ingxaki enkulu endiyibonayo rhoqo kukuba abantu bathetha kubalandeli babo kunokuba bathethe kunye kubo.
Kutshanje, sifumene isikhalazo kubathengi Twitter malunga nomnye wabathengi bethu. Nangona isikhalazo besingajoliswanga ngqo kumthengi, siye sagqiba kwelokuba eyona ndlela ingcono kukuphendula kwaye sibonise ukuba sibamamele abathengi bethu, kwaye silapha ukunceda.
Umthengi uphendule ngelithi ukwamkelwa kwethu yayikukubuyekezwa kwesikhalazo sokuqala. Ke ukuphinda ubuyekeze, umthengi unesikhalazo kwaye wasithetha ku-Twitter. Umxhasi wethu uyaphendula kwaye unikezela ukunceda, kwaye umthengi ujonge umnikelo njengoneleyo wokugcina ukuthembeka kwabo.
Yile nto imithombo yeendaba zentlalo imalunga nayo. Endaweni yokwenza umxholo othetha nje kubalandeli bakho, chitha ixesha lokumamela kunye nokunxibelelana neencoko esele zenzeka kwi-Intanethi. Oku kubuyela kwindawo yoqobo yokuba imithombo yeendaba zentlalontle.
Akukho mntu uthanda umfana ongenakwenza nto, kodwa uthethe ngaye kunye nento ayenzayo. Thatha ixesha lokumamela, kwaye ujoyine iincoko ngaphandle kokukhuthaza into eyenziwa lishishini lakho.
Njengokuba u-Ernest Hemingway watsho, “Ndiyathanda ukumamela. Ndifunde lukhulu ngokuphulaphula ngenyameko. Abantu abaninzi abamameli. ”
tags: lalelaImidiya yokuncokolaSocial Media Marketingkuthetha
Jan 30, 2013 kwi-5: 41 AM
nawe. Sebenzisa imithombo yeendaba kwezentlalo njengenkonzo yabathengi ayichubekanga kuphela kwaye
isebenziseka lula kubathengi bakho, kodwa inokuvelisa ukugcwala kakhulu,
ukwazisa ngebrand kwaye ukuba yenziwe ngokuchanekileyo nangendlela ehlekisayo, inokuba yintsholongwane kwaye yinto exabisekileyo.
Kunyaka ophelileyo, sinokubona umzekelo omkhulu owenziwe yiBodyform ekuphenduleni
URichard Neill. Ezi zinto zilungile kwaye iimveliso kufuneka zijolise kuloo nto. Ukumamela ngundoqo kuyo yonke into.